Ny Nokia 2.2 dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana | Androidsis
Roa herinandro lasa izay dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Nokia 2.2. Io no smartphone finday avo lenta avy amin'ny mpanamboatra, izay manana ny fanavaozana ny Android Q azo antoka ihany koa. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy tany India ity telefaona ity, saingy amin'ny farany manomboka ny fampiasana azy manerantany. Satria natsangana tamin'ny fomba ofisialy tany Espana ity finday ity.
Amin'izany fomba izany dia vita kely kokoa ny katalaogin'ny marika eto amintsika amin'ny fahatongavan'ity Nokia 2.2 ity. Fitaovana tsotra, misy famaritana fototra sasany, fa misy vidiny koa mahaliana azy ao anatin'ity sehatry ny tsena ity.
Na eo aza ny maodely ambany indrindra dia niahiahy ny hamela anay hanana fiasa mahaliana sasany ilay marika. Amin'ny lafiny iray, ny faharanitan-tsaina artifisialy ho an'ny sary maivana, bokotra iray hidirana mivantana amin'ny Google Assistant na ny fisian'ny Android One ho toy ny rafitra fiasa, ho an'ny traikefa madio an'ny mpampiasa. Ny fanavaozana ny Android Q, izay zavatra efa azo antoka, dia tsy isalasalana fa manampy azy hivarotra tsaratsara kokoa.
Ny Nokia 3.2 sy Nokia 4.2 dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana
1 Famaritana Nokia 2.2
Famaritana Nokia 2.2
Amin'ny ambaratonga teknika, ny Nokia 2.2 dia maodely tsotra. Manatanteraka tsara ao anatin'ny faritra misy azy io, ankoatry ny filokana amin'ny famolavolana lamaody amin'ny Android. Hatramin'ny nampiasan'ny marika marika ambony endrika miendrika U eo amin'ny efijery misy azy, mitovy amin'ny fihenana miendrika rano mitete iray aza, fa somary boribory kokoa kosa ny endrik'ity tranga ity. Raha ny fahitantsika azy, ireo finday ao amin'ny katalaogin'ilay marika dia mandray an-tsary tsimoramora ihany koa ity famolavolana ity, izay lamaody ankehitriny. Ireo no fiparitany, naseho tamin'ny marika mihitsy tamin'ny fampisehoana azy:
Pikantsary: ​​IPS 5,71-inch miaraka amin'ny HD + Resolution
Mpandrindra: MediaTek Helio P22
Tahiry anatiny: 16 GB (azo itarina amin'ny karatra microSD)
Fakan-tsary aoriana: MP 13 miaraka amin'ny vorona f / 2.2
Fakan-tsary anoloana: MP 5 miaraka amin'ny vava f / 2.2
Rafitra miasa: Android One miorina amin'ny Android 9.0 Pie
Fifandraisana: Bluetooth 4.2, LTE / 4G, WiFI 802.11 A / C, GPS, GLONASS
Ny hafa: bokotra natokana ho an'ny Google Assistant, Famantaran-tarehy, tranga azo takalo
Refy: 146 x 70.6 x 9.3 mm
Na eo aza ny maha-maodely fidirana azy, ny marika dia te hikarakara fatratra ny lafiny sasany. Noho izany, mahita an'ity Nokia 2.2 ity isika miaraka amina lahasa sasany toy ny bokotra natokana ho an'ny Google Assistant sy ny fisian'ny Google Lens, izay zavatra tsy fahita matetika ato amin'ity sehatry ny tsena ity. Ka zavatra azo omena lanja tsara amin'ny telefaona io. Misy lafin-javatra iray izay mifanaraka amin'ny zavatra hitantsika betsaka ao anatin'ity karazana telefaona ity.
Satria ny fitaovana tsy manana sensor momba ny dian-tànana. Saingy ny marika dia nanolotra ny famahana ny fanekena endrika. Izy io dia zavatra izay ataon'ny marika maro amin'ny findainy avo lenta, Nokia no farany tafiditra, araka ny hitantsika. Noho izany dia manana an'ity fomba ity hamaha ilay fitaovana izahay. Ny sasany mety somary diso fanantenana noho ny tsy fisian'ny sensor toy izany amin'ny telefaona.
Ny Nokia 2.2 dia misy amin'ny fomba ofisialy any Espana ankehitriny. Omaly alatsinainy dia efa amidy, ka ny mpampiasa rehetra liana amin'ity telefaona marika vaovao ity dia efa afaka manao izany. Izy io dia amidy amin'ny isa mahazatra amin'ny fivarotana finday marika. Noho izany isika dia afaka mividy azy amin'ny Internet sy amin'ny magazay ara-batana nefa tsy misy olana.
Navoaka tamina fikirakirana RAM sy fitehirizana tokana izy, araka ny hitantsika tao amin'ny filazalazana azy. Ny vidiny dia 99 euro. Ankoatr'izay, ity Nokia 2.2 ity dia miaraka amina andiana fonony azo soloina, izay zavatra mety hahaliana ny mpampiasa maro. Ao amin'ny tranokalan'ny marika dia misy maodely maromaro, miaraka amin'ny loko mavokely, manga sy loko maitso ary ala maitso. Tsy fantatsika raha toa ka maro ny tranga hanangana azy, fa amin'izao kosa dia ireo no misy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana ny Nokia 2.2
Ny andian-dahatsoratra Honor 8X dia nivarotra smartphone 15 tapitrisa mahery